I-Klear Connect: I-CRM yeNtengiso yokuPhembelela kunye nokuKhangelwa kwePhulo | Martech Zone
I-Klear Connect: I-CRM yokuThengisa i-Influencer kunye ne-Tracking Tracking
NgoMgqibelo, Matshi 23, 2019 NgoMgqibelo, Matshi 23, 2019 Douglas Karr
KlearItekhnoloji yokuthengisa enefuthe, yongeze Klear Qhagamshela, Isisombululo esipheleleyo kulawulo lwempembelelo yempembelelo. Uphuhliso olubalulekileyo lwentengiso enefuthe- kuzo zombini iimveliso kunye neempembelelo. UKlear uphendula lo mbuzo:
Ugcina njani yonke into?
Qhagamshela ulungelelwaniso lonxibelelwano phakathi kweempawu kunye nabashukumisayo ngokuzenzekelayo iinkqubo zemanyuwali kuyo yonke inkqubo yempembelelo yomjikelo wobomi ngenkonzo edityanisiweyo yengxoxo kunye nokukwazi ukusebenzisana kumxholo, kunye nokulandela umkhondo wentlawulo kunye namabali e-Instagram.
Klear Qhagamshela yenza ukuba iimveliso zikhuthaze ubudlelwane obunempembelelo kunye nempumelelo yephulo, kubandakanya ukukwazi:
Ukubhabha: Sebenzisa iitemplate ezimfutshane ezinokwenziwa ngokwezifiso ukubonelela ngefuthe lakho ngezikhokelo eziyimfuneko zokuqhuba iphulo lakho
Ukuvumelanisa iProjekthi: Ukuhambisa unxibelelwano kunye nenkonzo edibeneyo yokuncokola ukuhlala unxibelelana rhoqo nabashukumisayo, wabelane kwaye uvume izimvo zoyilo, kunye nokulandela umkhankaso wakho wamva nje
Izivumelwano: Thumela kwaye usayine izivumelwano ngaphandle kobunzima
Ukulandelwa kweNtlawulo: Iintlawulo ezihlangeneyo kunye nokudluliselwa kwemali ngqo
Landelela amabali: Mema abaPhembeleli ukuba baqinisekise iprofayile yabo ye-Instagram ukuze babeke esweni amabali e-IG
Ukulawula imisebenzi yemihla ngemihla yephulo elinempembelelo kunokuba ngumceli mngeni kubathengisi, ngakumbi xa iimveliso zineephulo ezininzi ezisebenza ngaxeshanye. Senze iKlear Connect ukuze ihambise inkqubo ukuze abathengisi babe nazo zonke iimfuno zomkhankaso wabo endaweni enye, ukuvumela nabani na ukuba alawule yonke le nkqubo ukusukela ekuqaleni ukuya esiphelweni ngqo kwiqonga laseKlear. ”
U-Eytan Avigdor, umphathi we-Klear kunye nomseki-mbumbano
Isisombululo sikaKlear sisinxibelelanisi esidibanisa iimveliso kunye neempembelelo; I-Klear Connect yaphuhliswa ukujongana neemfuno zeCRM zabasebenzisi ngokwenza unxibelelwano olucacileyo. Iqonga lokuthengisa elinempembelelo ngoku lenza amashishini ukuba afumane, aphathe, abeke esweni, kwaye anike ingxelo ngokuzibandakanya kwabo kwintengiso kwiqonga elinye.
Ukuqhagamshela kubonelela ngeemveliso ngeetemplate ezimfutshane zesikhokelo sophawu oluqhelekileyo, ukuhanjiswa, kunye nokulindelweyo ukuze amaqela omabini akwazi ukulungelelanisa iinjongo. Zonke izixhobo zinokwabelwana ngokuthe ngqo kunye nabaphembeleli nge-Klear Connect inkonzo yencoko edibeneyo, ngelixa inkqubela phambili inokulandelwa ngezaziso zexesha lokwenyani.
Ukongeza, iimveliso zinokumema abachaphazeli ukuba baqinisekise iakhawunti yabo ye-Instagram, ivumela ukulandelwa kwamabali e-Instagram. Ke, ukwenza lula umjikelo wolawulo lwempembelelo kumjikelo.
Eyasungulwa ngo-2011, i-Klear isisombululo esipheleleyo sokuthengisa, esinika abathengisi amandla okwakha, ukulinganisa nokulinganisa iinkqubo ezishukumisayo ukususela ekuqaleni ukuya ekupheleni. Ngolwazi olugcweleyo kwimarike, iKlear isetyenziswa kwihlabathi liphela ziinkampani zeFortune 500, kunye nokuthengisa okuphambili kunye neefemu zonxibelelwano noluntu. Ngokwazi ukusondeza kubaphembeleli abancinci kunye nokufumanisa abalandeli ababuxoki, isoftware yokuphumelela amabhaso ka-Klear sisixhobo sokuphela kokugqibela esinika amandla abathengisi ukuba baqalise imikhankaso ephembelelayo. Okwangoku uKlear unabasebenzi abangaphezu kwama-30 kwihlabathi liphela, kunye neeofisi eTel Aviv, eNew York, eChicago naseLondon.
Cwangcisa iDemo yeDemo
tags: impembelelo kwi-crmmfutshane
Iindlela eziBalulekileyo zoYilo lweWebhu zokubandakanya iwebhusayithi yakho yeFirm Law
Ubukrelekrele bokwenza izinto buwanceda njani amashishini